— By Oway December 20, 2018 December 21, 2018 Hotels Travel Tips	Comments Off on ပိတ်ရက်တွေမှာ အပန်းဖြေအနားယူဖို့ Staycation ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်သင့်လဲ?
နေ့စဉ်ကျင်လည်နေရတဲ့ ငြီးငွေ့စရာပတ်ဝန်းကျင်ကနေ ရုန်းထွက်ပြီး အပန်းဖြေအနားယူချင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ခရီးတစ်ခုထွက်ဖို့အတွက်လည်း အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။
ဒီလိုမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ Staycation က အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။
“Stay” နဲ့ “Vacation” ဆိုတဲ့ စာလုံးနှစ်လုံးပေါင်းစပ်ထားတဲ့ “Staycation” ဆိုတာကတော့ ကိုယ်နဲ့နီးနီးနားနား ဟိုတယ်တွေ၊ Resort တွေမှာ အနားယူရင်း အပန်းဖြေတာမျိုးပါ။
အခုနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်း ပြည်တွင်းရော ပြည်ပမှာပါ အရမ်း Popular ဖြစ်လာတဲ့ Relaxation Style ပေ့ါ။
Staycation လုပ်မယ်ဆိုရင် ပုံမှန်ခရီးထွက်သလိုမျိုး ခရီးစဉ်တစ်ခုကို အစအဆုံးစီစဉ်ဖို့ ခေါင်းစားစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်မြို့ထဲက ဟိုတယ်/Resort တစ်ခုခုမှာပဲ သက်သောင့်သက်သာ သွားရောက်အနားယူနိုင်မှာဆိုတော့ အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းသက်သာပြီး တကယ့်ကို အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒီလိုအချက်အပြင် နောက်ထပ်ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေကြောင့် Staycation ကို ရွေးချယ်သင့်လဲဆိုတာ အခုပဲကြည့်လိုက်ရအောင်!
Staycation က ပုံမှန်ခရီးတွေလို လေယာဉ်လက်မှတ်၊ အဝေးပြေးကားလက်မှတ် ဒါမှမဟုတ်
ကားစင်းလုံးငှားခတွေ ကုန်စရာမလိုပါဘူး။ ပြီးတော့ ပွဲတော်ရက်တွေမှာဆိုရင် ဟိုတယ်အတော်များများက အထူးပရိုမိုးရှင်းတွေပေးလေ့ရှိတာဆိုတော့ အရမ်းတန်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ပိတ်ရက်အတွက် လူတိုင်းရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
လေယာဉ်လက်မှတ်၊ ကားလက်မှတ်ဘိုကင်တွေ၊ ဗီဇာတွေအတွက် အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းနဲ့ စိတ်ရှုပ်နေရဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဟိုတယ်မှာ ဘိုကင်တင်ပြီး ပေါ့ပေ့ါပါးပါးသွားနားလိုက်ရင်ရပြီ!
ခရီးစဉ်တလျှောက် လေယာဉ်/ကားစီးရင်း ပင်ပန်းတာ၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခေါင်းမူးတတ်တာတွေကြောင့် ခရီးရောက်ရောက်ခြင်းနေ့တွေမှာ သေချာလျှောက်မလည်နိုင်တာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်နော်!
Staycation သွားမယ်ဆိုတော့ ဒီလိုမျိုးအတွက် လုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
နီးနီးနားနားက ဟိုတယ်/Resort မှာပဲ သွားနားမှာဆိုတော့ Luggage ကြီးတွေနဲ့ အထုပ်အပိုးတွေ အများကြီး ပြင်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ခေါင်းစားစရာတစ်ခုလျှော့သွားတာပေါ့။
ခရီးဝေးကြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ လေယာဉ်/ကားစီးဖို့အချိန်တွေက ကိုယ့်နားချိန်အဖြစ်ပိုထွက်လာတာပေါ့။
ပြီးတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Flight Delay ဖြစ်တာလိုမျိုး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာအခြေအနေတွေကိုလည်း ကြုံတွေ့စရာမလိုတော့ဘူးနော်!
ဒါကြောင့် ပိတ်ရက်ရှည်တွေရောက်မှမဟုတ်ပါဘူး။ Weekend တွေမှာ အေးအေးဆေးဆေးအနားယူဖို့အတွက်လည်း Staycation တွေကို ရွေးချယ်သင့်တာဖြစ်ပါတယ်။
Staycation တစ်ခု စီစဉ်တဲ့အခါ အသုံးဝင်စေမယ့် အချက်လေးတွေကိုလည်း ဆက်လက်ဝေမျှပေးလိုက်ပါရစေ။
၁) သွားရောက်အနားယူမယ့်နေရာကို သေချာရွေးပါ။ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ကိုက်ညီမယ့် ဟိုတယ်၊ Resort တွေကို အချိန်ပေးစဉ်းစားရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ – သင်က Golf ရိုက်တာကို နှစ်သက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် Golf ကွင်းနဲ့တွဲဖွင့်ထားတဲ့ Resort တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်တာမျိုးပေါ့။
၂) ကိုယ်အသုံးပြုမယ့် Budget ကို သတ်မှတ်ထားပါ။ Vacation လောက်အကုန်အကျမများတာမှန်ပေမယ့် Staycation အတွက်ကိုလည်း Budget တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး ရွေးချယ်စီစဉ်တာက အကောင်းဆုံးပါ။ ခရစ္စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးလိုအချိန်တွေမှာဆို Staycation အတွက်သီးသန့် Package တွေကို Discount နဲ့ရနိုင်ပါတယ်။
၃) Social Media တွေမှာ ရှာကြည့်ပါ။ အခုရက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လိုနေရာလေးတွေက Staycation လုပ်လို့ကောင်းလဲ? ဘယ်ဟိုတယ်တွေမှာ Promotion တွေပေးနေလဲ? စတဲ့မေးခွန်းတွေအတွက် အဖြေကို Social Media အသုံးပြုရင်း ရှာကြည့်ပါ။ မြန်မာနိုင်မှာဆိုရင်တော့ Facebook ပေ့ါ။ Travel Blogger တွေရဲ့ Page တွေကို ၀င်ကြည့်ပြီး သူတို့ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
၄) ကိုယ်နဲ့အနီးနားမှာရှိပြီး မရောက်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေ၊ မလုပ်ဖူးသေးတဲ့ Activities လေးတွေကို စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ။
သင်နေထိုင်ရာနဲ့ နီးနီးနားနားမှာရှိပေမယ့် မရောက်ဖူးတဲ့နေရာလေးတွေလည်းရှိမှာသေချာပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့လယ်က ဆူးလေဘုရားကို ရန်ကုန်သူ၊ ရန်ကုန်သားတွေ သိပ်မရောက်ဖြစ်ကြသလိုပေါ့။
ဒီတော့ Staycation လေးနဲ့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ Activities လေးတွေကိုလုပ်ရင်း စိတ်ကြိုက်အနားယူနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကျင်လည်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲ ရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေ ပြောင်းလဲခံစားနိုင်ဖို့ အခွင့်ကောင်းပါပဲ။
ဒီတော့ လာမယ့်ပိတ်ရက်တွေအတွက် Staycation လုပ်ဖို့နေရာကို အခုပဲရွေးလိုက်ကြရအောင်!
အရမ်းသက်သာတဲ့ အထူးဈေးနှုန်းတွေနဲ့ Christmas & New Year Special Staycation Package တွေကလည်း Oway မှာ အသင့်ပဲဆိုတော့ > http://bit.ly/XMasNewYearStaycation မှာ အခုပဲ Booking တင်လိုက်တော့နော်!
ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ခရီးသွားမိတ်ဆွေတွေအတွက် Flight, Hotel, Express Buses, Visa, Tour, Car Rental စတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Oway Travel Customer Care Center 01 2318939 ကိုသာဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Asasaying goes “Life will always get busy, make time to do the things you love.”, it is very important for people to balance their lives with work.
Wherever your job nature is, you should spare some time for your beloved ones or for your hobbies. At that time, traveling has become one of the most popular getaways in both local and foreign countries.
However, planningatrip is not very easy, right? It needs planning, takes time and costsaparticular budget. So, if you are findingaperfect getaway from your life but can’t spare many days foralong trip, staycation will be the best answer for you.
A cozy staycation, spending the holidays ataplace, hotel or resort which is not very far away from your home, is more than enough to create wonderful and unforgettable memories with your beloved ones on holidays!
It has become the trendiest relaxation style recommended by top travel bloggers from all over the world.
Wondering why staycation becomes popular? Let’s find out the reasons now!
It is cheaper than regular vacations
Flight tickets? Express bus tickets? Visa?
Forastaycation, you just need to bookahotel or resort room to createajoyous holiday for you.
Usually, those ticket fares are almost half of total traveling cost. Since you can save money for those prices, it will definitely reduce your total cost.
It can be planned withinafew minutes
Not likearegular vacation,astaycation can be arranged inafew minutes. You don’t have to stress out
calling the travel agencies to ask flight/express bus time and fares, adjusting with the budget, etc.
There is no travel fatigue
Although trips and getaways are supposed to make people relaxed and energized, sometimes it can leave you exhausted because of travel fatigue.
For example, you may have to suffer from motion sickness and spend the first day of your trip lying
Choose staycation to stay refresh and enjoy every single moment with the things you love to do.
You don’t need to packalot
For some people, packing may cause stress and consumealong time.
However, if you doastaycation, you don’t have to carryalot of things.
It is just spending your holidays atanearby relaxation place and so bring only some essential items and enjoy your leisure time.
Pamper yourself with Christmas & New Year Staycation Packages! Before that, check the following points which
can help you createawonderful staycation for you.
1) Figure out what kind of vacation you would like to take.
Let’s say you like golf! Then, you can chooseahotel/resort which hasagolf course.
2) Setaparticular budget limit beforehand. To avoid overspending on unnecessary things, it is recommended
to set your affordable limit. If you have time, useafew minutes to search for special discounts on staycation
3) Search on social media. What is the most-favored destination forastaycation? Which hotels are offering
promotions? Use social media to find out the answers. Reading recommendations of some travel bloggers is also
a good idea to chooseasuitable staycation spot.
4) Try new things and feel your hometown fromadifferent perspective. For sure, there will be some hidden gems which you don’t getachance to find out. Do staycation and getachance to visit those places!
So, can’t to doastaycation on coming holidays? Book your room now >> http://bit.ly/XMasNewYearStaycation
Visit oway.com.mm to get best deals for hotel, flights, express buses, tours, and Myanmar Visa!